Kudlwengulwe kwabulawa abazala eNdiya | News24
Kudlwengulwe kwabulawa abazala eNdiya
New Delhi - Kuhlanganyelwe kwadlwengulwa amantombazane amabili abe eselengiswa esihlahleni esigodini esisenyakatho yezwe eNdiya, kusho izikhulu ngoLwesine.
Amantombazane amabili, okuyizihlobo ezineminyaka engu-14 nengu-16 ubudala, zinyamalale e-Uttar Pradesh, eBadaun, ngoLwesibili ebusuku kanti izidumbu zawo zitholwe zilenga esihlahleni ngoLwesithathu.
"Ubaba wentombazane, ofake isimangalo, uthe izisulu zidlwengulwe ngabalisa abahlanu ngaphambi kokuba zilengiswe esihlahleni. Ukuhlolwa kwezidumbu kuveze ukuthi ngempela amantombazane adlwenguliwe nokuthi ashone ngemuva kokulengiswa," kusho isiskhulu samaphoyisa esifunda u-Atul Saxena ngocingo.
Kuboshwe umsolwa oneminyaka engu-18 ubudala, kusho uSaxena, kanti amaphoyisa asehlanganise ithimba elinamalungu angu-60 elizophenya kuboshwe abanye abasolwa maduzane.
"Okwamanje ngeke sikuqinisekise ukuthi izisulu zizilengisile yini noma zilengiswe abasolwa," usho kanje.
Lesi sehlakalo sesiholele ekutheni kube nemibhikisho abantu basendaweni bakhala ngokuthi akukho okwenziwa amaphoyisa futhi awasheshanga ukuthungatha amantombazane ngemuva kokunyamalala kwawo.